Fifanarahana codeshare Koreana Air sy Royal Brunei Airlines
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Fifanarahana codeshare Koreana Air sy Royal Brunei Airlines
Korean Air sy Royal Brunei Airlines dia nanambara ny fanombohana fiaraha-miasa codeshare manomboka amin'ny 4 septambra.
Ny fifanarahana Codeshare dia ahafahan'ny seranam-piaramanidina mivarotra serivisy amin'ny sidina an'habakabaka hafa ambanin'ny laharan'ny sidiny manokana. Amin'ny alàlan'ny fifanarahana vaovao, Korea AirA dia hivarotra seza amin'ny làlan'ny Incheon ~ Brunei an'ny Royal Brunei Airlines eo ambanin'ny laharan'ny sidina amin'ny maha mpitatitra marketing azy, nefa tsy manomboka ny làlana. Ny làlan'i Incheon ~ Brunei dia ampiasaina inefatra isan-kerinandro (talata / alakamisy / zoma / alahady).
Ireo mpandeha mamandrika ny sidina amin'ny alàlan'ny Korean Air dia afaka mankafy ny famandrihan'ny seranam-piaramanidina serivisy sy serivisy momba ny tapakila, ary manangona kilometatra amin'ny fandaharana flyer matetika, SKYPASS.
Korea Air amin'izao fotoana izao dia manana fandaharana codeshare miaraka amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka 35, ao anatin'izany ireo mpikambana ao amin'ny SkyTeam toa ny Delta Air Lines sy Air France, amin'ny zotram-pifandraisana 950. Amin'ny alàlan'ny fanitarana tsy tapaka ny fifanarahana codeshare, ny Korean Air dia hanome hatrany fandaharam-potoana sy safidy maro samihafa ho an'ny mpanjifa.
Flight No. Sector Departure Arrival Andro fiasana
BI651 / KE5652 Brunei (BWN) hatrany Seoul, Korea atsimo (ICN) 00: 25 06: 50 Talata sy alakamisy
BI 652 / KE5651 Seoul, Korea atsimo (ICN) hatrany Brunei (BWN) 12: 35 16: 55
BI651 / KE5652 Brunei (BWN) hatrany Seoul, Korea atsimo (ICN) 15: 10 21: 35 Zoma & Alahady
BI 652 / KE5651 Seoul, Korea atsimo (ICN) hatrany Brunei (BWN) 22: 35 02: 55
4 mandaitrath Septambra 2019
Centara dia manomboka ny fanavaozana ny efitrano THB 650 tapitrisa ao amin'ny Hotely flagship Bangkok
Toerana vakoka eran-tany UNESCO Qutub Minar amin'ny hazavana vaovao